चीनमा अर्को रोगको प्र’कोप, यस्ता छन यो रोगका लक्षणहरु ! सबैले जानिराखौ - Alert Khabar
Homeस्वास्थ्य-जीवनशैलीचीनमा अर्को रोगको प्र’कोप, यस्ता छन यो रोगका लक्षणहरु ! सबैले जानिराखौ
काठमाडौं, असोज ५ । विश्व अहिले को रोनाभा इरसको म हामारीबाट आ क्रान्त छ । चीनको वुहानबाट को रोनाभा इरस फै लिएको मानिन्छ ।यतिबेला चीनमा एक अर्को रोग ब्रुसेलोसिसको पनि प्र कोप देखापरेको छ । गान्सु प्रान्तको राजधानी लान्झोमा तीन हजारभन्दा बढी व्यक्ति यसबाट सं
क्रमित भइसकेका छन् ।
लान्झोको स्वास्थ्य आयोगकाअनुसार यो रोग सं क्रमित जनावरको सम्पर्कमा आउँदा लाग्ने गर्दछ । ब्रुसेलोसिसलाई ‘माल्टा फिभर’ पनि भन्ने गरिन्छ ।लान्झोस्थित एक औषधि उत्पादन कार खानाबाट सन् २०१९ को जुलाई र अगस्टको बीचमा यो ब्याक्टेरिया (जी वाणु) फैलिएको थियो । जुन कारखानामा ब्रुसेलोसिसवि रुद्धको खोप बनाइँदै थियो ।
यसवि रुद्ध चीनमा चे तावनी जारी गरिएको छ । ११ ओटा अस्पतालहरु तोकेर त्यहाँ बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिइएको छ । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी)काअनुसार यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन । तर, ब्याक्टेरियायुक्त दूषित खानेकुराबाट ब्रुसेलोसिस फै लिनसक्छ ।
ब्रुसेलोसिस के हो ?
यो ब्याक्टेरियाबाट हुने रोग हो । यो ब्याक्टेरियाले विशेषगरी गाईवस्तु, सुंगुर, भेडा, बाख्रा र कुकुरहरुलाई सं क्रमित गर्छ । ती सं क्रमित पशुको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने मानिस पनि बिरामी हुन्छन् । तिनीहरुको मासु खाँदा वा तिनीहरुले दूषित गरेको पानी पिउँदा मानिसमा सं क्रमण फैलिन्छ ।
ब्याक्टेरिया सं क्रमित क्षेत्रको हावामा पनि रहनसक्छ । त्यसक्रममा सास लिँदा त्यो शरीरभित्र पसेमा मानिस सं क्रमित हुनसक्छन् ।मानिसले जनावरको दूध नउमाली र त्यस्तो काँचो दूधबाट बनेको चिजलगायतका खानेकुरा खाँदा यो रोगको जोखिम बढी हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ छ ।
ज्वरो, पसिना आउनु, टाउको दुख्नु, मांसपेसीमा दुखाइ, बेचैनी र भोक नलाग्नुजस्ता यो रोगका लक्षण हुन् । कुनै लक्षण लामो समयसम्म देखिनसक्छ । बारम्बार ज्वरो आउने, जोर्नीहरु दुख्ने, अन्डकोष सुन्निने, कलेजोमा समस्यालगायत हुनसक्छ । धेरै थकान हुन्छ ।
अवस्थामा ब्रुसेलोसिसले प्रजनन् प्रणालीलाई स्थायी नोक्सान पुर्‍याउनसक्छ । राम्रोसँग उपचार गरेन भने मानिसमा बाँझोपन हुनसक्छ । यो रोगको उपचार सम्भव छ ।
ब्रुसेलोसिसका कारण हालसम्म कोहीपनि व्यक्तिको मृ त्युको घ टना भने बाहिर आएको छैन